Vintage iMaltese Ibhasi | Abaqeqeshi abaphambili
Abaqeqeshi abakhulu > Vintage iMaltese Ibhasi
Iibhasi eMalta zaziswa ngo-1905. Iminyaka imibala kunye neemilo zeeBhasi zaseMalta zitsale umdla wabantu balapha kunye nabaphambukeli ngokufanayo kunye neebhasi ezikhoyo kwiiposikhadi ezindala nezakudala. Ixesha elingaphezulu ibhasi laseMalta lifikile laza lenza indawo ebalulekileyo kubume bendawo. Kwiintsuku zokuqala iibhasi zazihonjiswe ngeminyhadala ekhethekileyo kwaye zabonisa imeko yesizwe ngexesha lembali ebalulekileyo. Ibhasi yemveli yaseMalta, eyaziwa ngesiMalta njengeXarabank yayeka ukusebenza ngo-2011 xa bonke babethathelwa indawo yimikhosi yanamhlanje.
Nangona kunjalo, kwiiParamount Coaches ezinye zeebhasi zesintu zakudala zisasetyenziselwa iMisebenzi yoMtshato kunye nokuhambisa abakhenkethi kwilizwe liphela, betyelela iindawo ezahlukeneyo zomdla.
Ngaba uyafuna ukwenza uSuku lwakho olukhethekileyo ukuba lukhunjulwe, wonge ixesha kunye nemali kwaye ufumane inkonzo ebalaseleyo? Bhukisha ibhasi yesiNtu yaseMalta ngosuku lwakho olukhulu kwaye ube nosapho lonke, iintombi kunye nabahlobo kwi-Iconic Maltese Bus yethu ngamava angenakulibaleka.
Utshintsho kunye nohambo
Sisebenzisa iibhasi zethu ezizodwa zeVintage, thina kwiParountount Coaches siya kuqinisekisa ukukunika amava angalibalekiyo kwiminyhadala yakho ekhethekileyo, iinkomfa kunye nenkuthazo kunye nohambo lwasekhaya
Ngolwazi oluthe kratya nceda uqhakamshelane nathi ku [imeyile ikhuselwe]